On: २०७६ चैत्र २१ गते, शुक्रबार, ०८:३४ बजे प्रकाशित
तपाईँ अस्पत्तालबाट घर फर्किनु भो तर बालुवाटार अझै फर्कन सक्नुभएको छैन। यसैबेला बिश्वमा फैलिरहेको कोरोना कहरले पूरै संसार बिरामी छ। तर पूरा संसार बिरामी भएको बेला तपाईँकै मातहतका मन्त्रीको ईमान पनि बिरामी भएको सुन्नुपर्दा सारा संसारले थुक्क भनिरहेको जस्तो लाग्छ।
तपाईँको निष्ठामा मैले कहिल्यै औँला उठाईन, तपाईँको दृढ ईच्छा शक्तिमाथि मैले सधै गर्व गरिरहेँ। तपाईँका देश बनाउने सपनाहरुको मलाई सधै माया लागेर आउँछ तर मिठो गासका बिच जब दाँतमा ढुङ्गा लाग्छ तब मैले तपाईँप्रति गरेका गर्वका ईमारतहरु गर्ल्याम् गुर्लुम ढल्छन्।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर गरेको तपाईँको उद्घोषले मजस्तै धेरै नेपालीलाई नेपाल अब बन्छ कि भन्ने लागिरहेको बेला वाईड बडी ख़रीदमा एकजना आश लाग्दा नेता रवीन्द्र अधिकारी मुछिए, तर तपाईँले घम्लङ्ग अंगालो हाल्नुभयो। ल त नि तपाईँ ठिक नै हो भन्ने ठानियो, चुप लागियो। केही समय अन्तरालमा तपाईँकै पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेल बालुवाटार जग्गा काण्डमा तपाईँको निगाह पाएर दुधले नुहाए। तपाईँले नै संरक्षण गरेपछि जनताले चनाखो गराएका कानमा कपास कोचे।
त्यसपछि तपाईँका सबैभन्दा प्रिय पात्र गोकुल बाँस्कोटाको सत्तरी करोड काण्डमा त सप्रमाण आरोप लगाउनेको पनि तपाईँले मजाले प्रतिकार नै गर्नुभयो। तपाईँकै शयनकक्षसम्म डाईरेक्ट पहूँच भएका मान्छेको तपाईँले जिम्मा लिएको साँचो नै होला भनियो।
मैले रवीन्द्र, बिष्णु र गोकुललाई भ्रष्टाचारी भनेको होईन। भन्ने ल्याकत पनि राख्दिन तर मिडियाले प्रश्न उठाएका मान्छेहरुलाई आफ्नो भनेर राष्ट्रप्रमूखले नै काखी च्याप्दिदा सुशासन चाही मर्छ नै, सुशासन मर्यो भने तपाईँको ज़िन्दगीभरिको त्याग पनि मर्छ, बिश्वाश त एकैपटकमा मर्छ, तर तपाईँका हकमा धेरैचोटी विश्वास बाँचेंको छ। अनि फेरि एउटा काखमा कति जनासम्म च्याँप्न सकिएला र प्रधानमन्त्रीज्यू?
अहिले बिश्व महामारीको संकटमा छ। कोरोना भाईरसबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीको सामना गर्न नसकेर जर्मनीको हेसे राज्यका अर्थमन्त्री थोमस स्याफरले गत शनिवार आत्महत्या गरे। तर नेपालमा त्यही महामारी जाँच गर्ने किट ख़रीद गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री र रक्षामन्त्री नै शंकाको घेरामा छन्। उनीहरु निर्दोष होलान् तर कोही न कोही त दोषी छ नि प्रधानमन्त्रीज्यू?
मलाई थाहा छ, तपाई भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, तपाईँको शेषपछि तपाईँको सम्पत्ति खाने कोही छैन, त्यसैले तपाईँलाई सम्पत्ति थुपार्नुपनि छैन। तर, किन बारम्बार गन्हाएका(?) सिनोहरु बोकेर हिड्नुहुन्छ? किन दिनदिनै भ्रष्टाचारका समाचार हेडलाईनमा हुन्छन्रु तपाईँ त कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री किन कमाउनिष्ठहरुको जालमा फन्फनी बेरिइरहनुभएको छरु किन तपाईँ कामै नलाग्ने सल्लाहकारहरुको वरिपरि हुनुहुन्छ?
अन्य सम्बन्धित समाचार: नेपालको कुटनैतिक कौशलताको अग्निपरीक्षा
जनता लक डाउनमा छन्, ज्यालादारी श्रमिकहरुको चुल्हो बल्न छाडिसक्यो। अमेरिकाजस्तो महाशक्ति राष्ट्रपनि कोरोना कहरमा नराम्ररी फँसेको छ। यो बेला तपाईँकै मन्त्रीहरुमा मानवता हराएको समाचार आउँछ। भन्नुस् पत्याउँ कि आँखा चिम्म गरौँ?
अनि थाहा होला नि प्रधानमन्त्रीज्यू,
तपाईँका मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सल्लाहकारका छोराहरुको यो ख़रीद काण्डमा संग्लनता छ भनेर समाचार के निस्केको थियो, तपाईँका आसेपासेहरुले त्यो पत्रिका नै बन्द गर्ने प्रयत्न गरेछन्, लोकतन्त्रमा प्रमाणसहितको बिरोध गर्न पनि नपाईने हो र? चीनबाट मगाउने सामान शतप्रतिशत गुणस्तरीय छ भनेर डंका पिटाउने हाकिमहरु एकाबिहानै ‘सामान गुणस्तरीय नभए प्लेन चढ्न पाउँदैन’ भन्छन्। अर्को दिन त्यसको गुणस्तरबारे मलाई थाहा छैन भन्छन्। मन्त्रालयकै महानिर्देशक र प्रवक्ता नै गुणस्तरबारे अनबिज्ञ छन् भने बिज्ञचाहिँ को हो निरु कि त्यसको गुणस्तर पनि तपाईँले नै बताउने हो र?
कुरो क्लियर छ। आपूर्ती गर्ने कम्पनी नक्कली, सामान नक्कली, बील नक्कली, त्यसबाट आउने नतिजा नक्कली! अनि यस्तो बेला पनि लुट्न खोज्ने भाइ भतिजाहरुलाई कहिलेसम्म बचाईराख्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू? यसमा कसैले लामो हात लगाएको छ, तपाईँलाई थाहा छ, कसले यो सबै गर्दैछ? अनि यत्ति हुँदा पनि तपाईँ झन् बिरामी भएर बस्न मिल्छ? किन यति सबै हुँदा हुँदैछ पनि तपाईँ उठ्नुहुन्न? ल ठिक छ कि चीनबाट मगाएका ती सामानहरु सरकारले प्रयोग नगर्ने निर्णय गर्यो, यसले स्वास्थ्यकर्मी र जनताको ज्यान त बच्यो तर यो घटनाले देशको ईज्जत कहाँ गयो प्रधानमन्त्रीज्यू? देशको ढुकुटीमा फेरि प्वाल परेको सोध भर्ना कसरी गर्ने?
मिडियाहरुले सरकारको बिरोध मात्र गरेका छैनन्। पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको लक डाउनको दिल खोलेर समर्थन गरेका छन् मिडियाले। सधै आलोचना गर्ने प्रहरीलाई स्याबास् भनिरहेका छन् जनताले। अनि यही स्याबासको बेला तपाईँका मन्त्रीहरुको कामलाई ‘क्या बात्‘ भन्नुपर्ने बेलामा ‘लुटपाट’ को समाचार लेख्न मिडियालाई खुशी लाग्ला र?
तपाईँ उठ्नोस्, देशका धमिराहरुलाई तातो पानी खन्याएर कुट्नोस्। यो महामारीमा को कतिखेर मर्छ थाहा छैन। संसारका सम्पन्न देशका मन्त्री, राज कुमारी, सेलिब्रिटी र खेलाडीहरु पनि अकालमै यो महामारी कोरोनाको शिकार भएका छन्। तपाईँका मन्त्रीहरु पनि यही कोरोनाकै कारणले मर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन, तिनीहरुलाई भनिदिनोस् न कात्रोमा गोजी हुँदैन।
२०७६ चैत्र २१ गते, शुक्रबार, ०८:३४ बजे प्रकाशित